"Osmo" imikhiqizo yenkampani. Amafutha zibe yizinkuni: izici, izinhlobo, amanani kanye nokubuyekeza amakhasimende
flooring Ngokhuni kunezinzuzo eziningi: kuba imvelo, isikhathi eside futhi uyabukeka emehlweni. Kudinga ukunakekelwa okukhethekile - akunzima, kodwa kudingekile - isikhathi ukusebenza kwawo. Ngenxa yale njongo kukhona ezinengilazi ekhethekile, ezifana namafutha nopende kusukela brand "Osmo".
Ukwakheka lezi kwemithombo yemvelo zihlanganisa izingxenye ekhethekile neqhaza ukubambezela izinqubo ezonakalisayo futhi ukuvikela izimuncagazi. Phakathi kwabo, entendeni wax, soy, flaxseed nezinye amafutha zemifino. Zonke izingxenye ziye ihlolwe ngokuphindaphindiwe futhi ayinangozi ngokuphelele. Umenzi oqinisekisa ukuthi imikhiqizo "Osmo" ayiqukethe compounds eziyingozi kahle imvelo. Namafutha ukhuni "Osmo" kungenziwa embozwe amathoyizi sokhuni ifenisha ngamagumbi zezingane.
Ukuhlanza kuzo zonke izingxenye nokuzicebisa iresiphi esiyingqayizivele "Osmo" vumela Ungasebenzisi nezivimbelakuvunda noma amakhemikhali anamandla.
Amafutha kanye wax zibe yizinkuni OSMO: izakhiwo
Namafutha ukhuni kukakhokho brand "Osmo" (OSMO), ekhiqizwa besebenzisa ubuchwepheshe bamuva, lihlaba ezijulile ubhoboza ukhuni, kodwa ishiya nalutho ezimbotsheni zemvelo. Ngakho, lapho uhlala kuyaqina zemvelo indaba, okusho ukuthi oyifunayo emoyeni exchange senzeka, kepha umswakama is hhayi angena enamathela. Lokhu kuvimbela ukuvuvukala noma zincipha kwezinkuni. Ngaphezu kwalokho, enamathela lobuchwepheshe "Osmo" unika amandla phansi, nemihuzuko ukumelana, ikhono dudula kwamanzi nokungcola, kanjalo prolonging ukuphila service kanye nokugcinwa kulula futhi yokuhlanza.
Ukuhlola izakhiwo ezingokwenyama enamathela Kwakuseshwa ngokuvumelana Industrial Amazinga German usebenzisa ezingcolisa asebenzayo ezifana iwayini, isiphuzo sezithelo, Cola, ikhofi, itiye, ubisi, ubhiya, njll Ngokusho imiphumela yokuhlolwa, "Osmo" (uwoyela ukhuni) kwenza phansi lokhuni amelana zonke izinto ezisetshenziswa.
Izinhlobo amafutha, ngokuya ngendawo okuyiwa kuyo
"Osmo" - uwoyela ukhuni, intengo zazo lutholakala kalula. Ukukhipha ke ngezindlela eziningana ezahlukene ukuthi engcono ukuhlangabezana nezidingo ngalinye esimweni esithile. Icubungula izindonga ngaphandle nangaphakathi kudinga indlela ehlukile nezinga ezahlukene ukumelana umswakama, umonakalo mechanical nezinye izinto ezithinta izingxenye zokhuni zika izakhiwo zokuhlala.
Amafutha ngemakhilayoni kanzima
Ukuze ukhuni flooring imikhiqizo efanelekayo eliqukethe e ngezithako zawo wax kanzima. Lwenza ungqimba matte, ogcina eyanele Coefficient friction kwisitezi akubi oshelelayo. Amafutha enamathela yalolu hlobo angathengwa ngentengo ruble 1,400 ilitha. Umkhiqizi "Osmo" futhi ukhiqiza amathuluzi ngesimo isifutho, zingabantu kancane eshibhile - ruble 1000 ilitha.
Umbala uwoyela-wax flooring "Osmo" Tonirujushchaja imikhiqizo lokhuni. Uma isicelo esisodwa ungqimba - eyatholakala tinting esobala, ungqimba 2 - umbala okukhulu.
Onjiniyela "Osmo" Kucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi umsebenzi kumele kwenziwe ngokushesha, futhi udale ithuluzi bome out ngokuphelele amahora ambalwa, kuyilapho iningi ezinengilazi for phansi lokhuni lokhu kuthatha izinsuku ezimbalwa. Lokhu "Osmo" kuyinto kancane ezibizayo (kusuka 1600 ruble / ilitha) (uwoyela ukhuni), kodwa intengo, uma ulinda isikhathi eside akunakwenzeka, noma uma indlu bayophila izingane ezincane, elingafunwa iyiphi ukuhwamuka amakhemikhali ngesikhathi omiswe kungaba yingozi.
Amafutha "Osmo" ifenisha
Le nkampani "Osmo" inikeza uhlu olubanzi imikhiqizo ukwelapha ezihlukahlukene ukhuni evele. Ngakho, kukhona umugqa esikhethekile ifenisha lokhuni bese Rattan, futhi uchungechunge ehlukile nasezinhlakeni, amathoyizi kanye amatafula.
Amafutha izimo okusezingeni eliphezulu nomswakama
umhlobiso wokhuni yokugezela zidinga handling baqaphele ngokukhethekile ukuba ikhono eliphezulu ukuze kuxoshwe izindlela amanzi.
Kukhona phakathi imikhiqizo inkampani "Osmo" uwoyela isihlahla ne umphumela amanzi-oxosha kanye UV isihlungi enamandla eklanyelwe isibambo engaphandle izingxenye lokhuni. wentengo ububanzi iqala kusukela mayelana 1200 ruble / ilitha.
Amafutha ngoba ezithile ukhuni
Ububanzi imikhiqizo for ekwelapheni evele lokhuni endlini ngempela ibanzi futhi ihlanganisa enamathela uwoyela esikhethekile bamboo, nemivini ezinye izinto ezifanayo. ukwakhiwa okunjalo ukunweba ukuphila imikhiqizo, ngenkathi sigcina kuyaqina yabo yemvelo nokuvikela ke ekulimaleni. Izindleko imayelana 1600 ruble / ilitha nangaphezulu.
Ngo uchungechunge ahlukene kuhlanganisa ezifana imikhiqizo yenkampani OSMO: uwoyela, upende, wax ukhuni esihle. Basuke ngokukhethekile bazivumelanisa izakhiwo elinama futhi ngokufanele sibhekane ngokuphumelelayo ukuvikelwa izinkuni zemvelo, ngaphandle kokubhubhisa izimfanelo zayo eziyingqayizivele. Intengo lezo zimali kuyinto kunaleyo efanayo senzelwe izinto ejwayelekile. Cishe akunakwenzeka ukuba ruble esingaphansi 1700 ilitha, kodwa ochwepheshe ukuqinisekisa ukuthi la mafutha uzokhokha for ngokwalo.
Ezicashile ukusebenza amafutha "Osmo"
Kukhona imithetho jikelele sokusingatha amafutha izibuya okhuni amakhabethe nokunye ngomuthi esakhiweni, odinga ukukwazi ngaphambi ukhetha futhi uthenge okuthile noma ngezinye izindlela.
Uma uhlela ukuyisingatha kanjani isihlahla, okuzokwenziwa etholakala ngaphandle isixazululo uwoyela Kunconywa ukuze ungeze isinqandakuvunda.
Esimweni lapho esihlahleni uzobe njalo elangeni, khetha uwoyela umsebenzi yokuhlunga UV.
Ngokuba 100% yemvelo ingelashwa izinkuni phansi phambi Ukulingana okufanele lomkhiqizo "Osmo" namafutha ukhuni ngemakhilayoni kanzima - ke lizovikela ukubukeka kwemvelo amabhodi phansi, kodwa ngeke thembeke awuvikele ekubhujisweni.
Musa singayinaki yilokho ofuna ukukufinyelela lamafutha kucacise umenzi: Ungasebenzisi amathuluzi umsebenzi ongaphandle ngaphakathi ekhaya, wokhuni oluqinile ifenisha, njll Kungenjalo, ngenxa yomsebenzi kungakhungathekisa, futhi imali uwoyela "Osmo", upende varnishes zibe yizinkuni OSMO, ngisho izinkuni ngokwalo kuyoba yihlane.
Ukuvikelwa Surface lenziwe laba likhulu uma isicelo 2-3 izingqimba zamafutha, ngokulinganayo futhi ngokucophelela bezihlikihla ithuluzi ngaphesheya kwamanzi.
Ukuze uvimbele izinqubo ukuwohloka zemvelo kwezinkuni idingekile ukuze ukucutshungulwa phansi ukhuni izindonga akuzona esingaphansi kokukodwa ngonyaka.
Zonke amafutha "Osmo" akhiqizwa ukungaguquguquki, ezifanele ukusetshenziswa ngqo, akudingeki kumakhemikhali awuketshezi ekhethekile kanye izithasiselo. It nanela kubanikazi ngubani okokuqala sibhekene ekwelapheni phansi lokhuni, njengoba imikhiqizo ye "Osmo" yakhelwe umthengi isilinganiso: ilula, elula futhi ephephile ukuyisebenzisa.
Ukuze oiling ibhulashi engcono ne izinwele elukhuni. A wax asele phezu kungenziwa wagcoba nge ibhulashi.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile ungqimba lwamafutha phansi bome kungakapheli amahora 12. Isendlalelo esilandelayo zingase zisetshenziswe kuphela emva omiswe ephelele odlule. Futhi, ezipholisha ukusebenza yokugcina wenziwa emva iphele amafutha.
izinto ezincane zokuhlobisa namathoyizi ingambozwa kwehlisa ngokuphelele emgqonyeni uwoyela, bese usula isikhathi oyifunayo.
Ukuze zonke ukuphepha yayo ngoba abantu, ngisho imikhiqizo ekhethekile "Osmo" - eco opende, varnishes, ukhuni - konke anobuthi efanayo nabo amehlo futhi nolwelwesi lwamafinyila. Sebenza nge-ejenti enjalo kuyadingeka kuphela endaweni umoya kahle. Yigcine kude nezingane.
Izinzuzo "Osmo" uwoyela:
1) Ukungena shí kwezintambo zesivikelo sesifuba izinkuni, futhi ngenxa yalokho, isivikelo ekubhujisweni;
2) ebusweni iphathwa akubi ezishelelayo;
3) ikhono ukufihla ukukhubazeka flooring zangaphandle;
4) ukwandisa amandla ngokhuni, ukumelana umonakalo ngemishini;
5) ukuhambisana sealants;
6) izakhiwo anti-static;
7) akusho clog pores kwezinkuni, sidlule emoyeni kodwa ayivumeli ukuncela umswakama;
9) ebusweni iphathwa ubukeka nice futhi kumnandi touch.
I yokuntula lamafutha "Osmo" zihlanganisa izindleko okusezingeni eliphezulu uma ziqhathaniswa izimali ezifanayo nezinye brand. Lokhu sahlanganisa isidingo yonyaka kabusha ekwelapheni izinkuni. Kodwa "Osmo" izimpendulo eziningi emihle evezwa ochwepheshe nabantu abavamile abaye ukubhekana ukucutshungulwa amapulangwe aphansi futhi izindonga lokhuni.
"Osmo" (ukhuni uwoyela) umthengi Izibuyekezo
Namuhla, ukuthi abathengi abaningi bakhetha ukuba uwoyela "Osmo", okuyinto ahlinzekwa ngumkhiqizi ngezindlela ezihlukahlukene, kuhlanganise - a kungekho nto enemibala emihle, parquet, nge okusheshayo omiswe isikhathi, futhi wenza umsebenzi primer omhlophe phambi imidwebo. Ngaphezu kwalokho, kukhona uwoyela for ukunakekelwa worktops lokhuni futhi ifenisha. Ngokwe-nokubuyekezwa, ngenxa Ukwakheka zayo eziyingqayizivele, umkhiqizo uyasinakekela elilungile kwezinkuni. Kusekelwe amafutha yemvelo afakiwe, kuhlanganise sunflower, osotovoe, linseed soy. Ukuhlanza nabo basebenzisa ubuchwepheshe banamuhla ukususa ngokuphelele zonke izinto eziyingozi futhi ezinobuthi futhi akhiphe amanyela. Izingxenye ezisemqoka kufakwe yokwakheka uwoyela, wax kuqinile, ngalokho lunikeze nomphumela okhethekile isimiso izinkuni. Ngokungafani ukuvenisha, akha ifilimu aminyene phezu kwezinkuni, uwoyela lingena shí oyiyo, gcizelela ngaphakathi yayo. Wax okuqinile uhlala phezu thembeke ukuvikela ke ekulimaleni mechanical nemihuzuko. izici Ngenxa uvumele ukhuni wax "ukuphefumula", inikeza yemvelo umswakama exchange evumela ukufeza ukuqina anda. Ngaphezu kwalokho, la mafutha alondoloza umbala yemvelo kanye ukuthungwa izinkuni. Ngenxa zonke lezi zimfanelo, ukubuyekezwa kwalo mkhiqizo omuhle kakhulu.
Indlela vimbela indlu yamapulangwe?
Yini kungaba isikhungo sokwelapha?
Ischemic isifo senhliziyo - kuyini? Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela